Alshabaab oo Weerar ku qaaday magaalada Beledweyne iyo Caruur isku Qoys ahaa oo ku dhintay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Alshabaab oo Weerar ku qaaday magaalada Beledweyne iyo Caruur isku Qoys ahaa oo ku dhintay - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Wararka laga helayo magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan Alshabaab ay xalay weerar ku qaadan magaaladaasi, kaasoo geystay qasaare kala duwan.
Saddex caruur oo isku qoys ah ayaa ku dhintay, laba kale oo isla qoyskaas ahna dhaawac ayaa kasoo gaaray markii uu gurigooda ku soo dhacay hoobiye intii uu socday iska hor imaad dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee ku sugan magaalada Beledweyne.
Dagaalka xalay ka dhacay magaalada Galbeedka Beledweyne ayay ciidamada dowlada iyo kuwa Amisom sheegeen inay dib u celiyeen maleeshiyaadka Al-shabaab ee weerarka soo qaaday.
Weerarka Alsahbaab ayaa ka danbeeay howlgal ay shalay ciidamada dowladda iyo AMISOM ka sameeyeen deegaano ku yaaala galbeedka Beledweyne, gaar ahaan deegaanka Luuq-jeelow oo kooxda Al-Shabab ay ku leeyihiin bar kontarool oo ay lacago kaga qaaddo gaadiidka soo gala Beledweyne.
Previous articleHay’adda NISA oo shaacisay howlgal ka dhacay Muqdisho oo lagu dilay Saraakiil badan oo Alshabaab ah
Next articleSenator Cumar C/rashiid oo Muqdisho kusoo laabtay iyo Su’aal aanu fileyn oo la weydiiyay